Maalinta: Meey 17, 2020
Tirada kiisaska fayraska corona ee dalka Brazil ayaa ka sarreeya Spain iyo Talyaaniga, taasoo ka dhigaysa waddanka afaraad ee adduunka ee ugu tirada badan kiisaska. Dalka ay tirada kiisaska la xaqiijiyay ay gaadhay 233 kun 142 [More ...]
Dhismihii ugu dambeeyay ee dhismooyinka casaanka iyo cadaanka oo ka koobnaa 1915 baloog oo ka mid ah Buundada Çanakkale ee 32, kaas oo dhismihiisu socday, waxaa lagu badalay xaflad uu ka qeyb galay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo lagu qabtay shir fiidiyow. Isagoo ka hadlayey xafladda Karaismailoğlu taariiqda kaabayaasha gaadiidka Turkiga [More ...]
Xuska 19-ka May xuska Atatürk, Maalinta Dhallinta iyo Isboortiga, oo ahayd sannadguuradii 1919aad ee Gazi Mustafa Kemal Atatürk gubashada ololadii badbaadinta ee Samsun isaga oo riixaya Samsun 101kii Maajo 19, wadajirka ah 5 degmo oo ka tirsan Antalya [More ...]
Xadgudubka Wadada Samsun ee loogu talagalay Badbaadada Ardayda
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dardar gelisay dhismaha isgoysyada dadka lugeynaya ee meelaha ay adag tahay in dadka lugeynaya ay nabadgelyadu nabadgelyadu khatar ku jirto. Metropolitan, oo aan diidi codsiyada ardayda, gaar ahaan gobolada ay jaamacaduhu ku badan yihiin [More ...]
7/24 Shillinta loo yaqaan 'Asphalt Shift' ayaa laga sii wadaa Bursa
Dawlada hoose ee magaalada, oo talaabo ka qaadday bandowga lagu soo rogay talaabooyinka coronavirus oo dhulka keenay ilaa 70 kun oo tan oo asphalt ah oo ilaa maanta soconaya, ayaa badbaaday 19 Maajo Atatürk. [More ...]
Wadada isku xirta Istanbul iyo Kocaeli ayaa ku dhow dhamaadka
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa hirgalinta mashaariicda waa weyn si loo helo gaadiid tayo leh oo raaxo leh meelo badan oo magaalada ah. Wadooyinka cusub ee la dhisay ayaa dardar galiya isu socodka gaadiidka, iyo wado kale oo gaadiid, [More ...]
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu sii waday inuu baaro howlaha hay'ad ee goobta markii la joojiyay bandoowga uu ku qaatay guriga magaalada oo dhan. İmamoğlu, oo baaritaano ka sameeyay xarunta ku taal Eyüpsultan oo qaadi doonta "dhoobo" dhoobo Dahab ah oo Dahab ah, ayaa yiri, “Hawshani waa [More ...]
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu baaray mashruuca 'dabiiciga dabiiciga' goobta, kaas oo daboolaya qaybta koonfureed ee Geedi Delta. Madaxweyne Soyer wuxuu martigeliyaa daraasiin shimbiro ah, gaar ahaan Flaingos, iyo kumanaan nooc. [More ...]
Mashruuca "baabuur guri", oo ajendaha loo keenay oo la xayeysiiyay baaxad weyn oo uu sameeyay Madaxweyne Erdogan, ayaa ajandaha uu ku jiraa mar labaad ka dib marxaladihii ay soo mareen maalmihii cudurka. Markan, mashruucu wuxuu sheegtey in dhulka, oo la sheegay in la dhisayo, lagu wareejiyay Sanduuqa Dhaqaalaha. [More ...]
Booqashada weftiga weftiga ahi ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Ganacsiga iyada oo dhoofinta loo dhoofinayo adduunka oo dhan lagu sii wado in lagu qabto jawi macmal ah iyada oo aan hoos loo dhigin xaaladaha cudurka cusub ee coronavirus (Kovid-19). Ku safro tallaabada Kovid-19 [More ...]
Shirka Qiimeynta Mashruuca Waseşme wuu socday
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy ayaa sheegay inay hadafkoodu yahay inay degmada ka dhigaan astaan ​​dalxiis oo tusaale u ah Mashruuca Çeşme. Wasiirka Mehmet Nuri Ersoy, marka loo eego Qorshaha Dalxiiska Aegean, [More ...]
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, "Haddii aysan wax khalad ah dhicin, waxaan rajeyneynaa in dalxiisku uu ka bilowdo dhaqdhaqaaqa dalxiiska gudaha sida May 28." ayaa yidhi. Wasiir Ersoy, oo ah nooca cusub ee telefishanka NTV toos uga daayo degmada Bodrum ee Mu ofla [More ...]
Liiska Buugga Saaxiibtinimada ee Ilmaha 0-6 Sano Jir Caruurta Da 'Hore Ayaa La Daayay
Maaddaama ay tahay Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, 0 buugaag carruurta u habboon oo loo qiimeeyay in ay ku habboon yihiin carruurta da'doodu tahay 6-427 ayaa lagu daabacay websaydhka Wasaaradda. 0-6 sano ayaa ka hartay machadyada xiriirka la leh wasaaraddeena [More ...]
Ekrem İmamoğlu wuxuu ku dhashay 1970 Trabzon. Kadib markii uu ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Trabzon, wuxuu ka qalin jabiyay Waaxda Maamulka Ganacsiga ee Jaamacadda Istanbul, wuxuuna qaatay shahaadada Masterka ee Kheyraadka iyo Maareynta ee Jaamacadda Istanbul. Dhismihii 1992 [More ...]
TCDD Tasimacilik wuxuu shaaca ka qaaday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyada Xawaaraha Sare ee loo yaqaan 'Speed ​​Speed ​​Train (YHT)', oo la hakiyey sababo la xiriira cudurka 'coronavirus', ka dib munaasabadda (ugu dambayn 1 Juun). Sida laga soo xigtay warkii Olcay Aydilek ee Habertürk, oo uu ku faafay coronavirus bishii Maarso. [More ...]
Maareeyaha Guud ee Maareeyaha Guud ee Maamulka Tareenka Waddooyinka ee Gobolka Kaaliye Maareeye Guud iyo xubin ka tirsan Golaha oo u rogay Kara iyo qadarinta Sharciga No. 233, Qodobka 8aad ee Dhul-gariirka Madaxweynaha ee ku-meel-gaarka ah lambarka 3-aad 2 [More ...]
Waxaa jiri doona taraam nostalgia oo ka shaqeeya İzmir iyo Istanbul Taksim. Mashruuca Nostalgic Tram Mashruuca Nostalgic Tram wuxuu u socdaa nolosha. Halkee laga dhisi doonaa Tareenka Nostalgicram? Xagee ayey ka gudbi doontaa? Birta Nostalgic, oo astaan ​​u ah Taksim Istiklal Avenue oo ku taal Istanbul, Izmir [More ...]
Waa khadka ugu badan ee la isticmaalo ee Adana Mersin State Railways. Waqtiga Safarku wuxuu qaataa qiyaastii 45 daqiiqo. Jadwalka Tareenka Adana Mersin wuxuu bilaabanayaa 6:00 subaxnimo, iyadoo aan loo eegin xilliga xagaaga iyo xilliga qaboobaha 23:15 [More ...]
Recep Tayyip Erdoğan, oo asal ahaan ka soo jeeda Rize, wuxuu ku dhashay magaaladda Istanbul 26-kii Febraayo 1954. Wuxuu ka qalinjabiyey Dugsiga Hoose ee Kasımpaşa Piyale 1965 iyo Dugsiga Sare ee Imaam Hatip 1973. Adigoo siinaya imtixaanka koorsooyinka kaladuwan, Eyüp [More ...]
Markii la dhammaystiray Tareenka Panama ee 1855, khadka tareenka ayaa markii ugu horreeyay ku xidhnaa badweynta Atlanta iyo Badweynta. 80 km oo tareen ah, rakaab ku safra bada badda dhanka xeebaha Bari iyo Galbeedka Mareykanka [More ...]
Maanta taariikhda 17 1972 991 Railways waxay leedahay lumis la'aan rikoodh ah XNUMX Milyan TL.